Somaliland: Eng. Faysal Cali Waraabe “Jamaal Isagaa guri quraarad ah ku jira inuu maalin walba anniga meel kasta naga caayo xaq uma laha” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Eng. Faysal Cali Waraabe “Jamaal Isagaa guri quraarad ah ku jira...
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa rasmiyan ugu dhawaaqay inuu yahay murrashaxa madaxweynaha ee xisbiga Cadaaladda iyo daryeelka dhexdiisa. Waxaanu shaki geliyay in murrashaxnimada Jamaal Cali Xuseen oo uu ku doodya inaanu wax taageero ah haysanin.
Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo la weydiiyay inuu Murrashax kale oo aan Jamaal Cali Xuseen, ahayn wato iyo inuu isaguba isa soo taagayo, waxaanu yidhi “Waa Maxay yaad aad soo waddaa, aniguba waan tartamayaa,talladeediina waan hayaa, golaha dhexena waan ahay inankan yari(Jamaal) noo hajabi maayo. Jamaal Isagaa guri quraarad ah ku jira oo waanu dhawraynaa ee inuu maalin walba anniga iyo Muuse Biixi meel kasta naga caayo horta xaq uma laha.”
“Idinkuna (Saxaafadda) nin aan jaad ka kicin oo qaadiraysan inaad maalin walba tidhaahdaan Musharrax Jamaal Cali Xuseen, dee waad waalaysaan markaad tidhaahdaan Musharrax weeyaan. Xisbigu sharci buu leeyahay waxaanu leenahay waar sharciga aanu ku marinno. Isaga Cali Guray uun baa la jooga,”:ayuu yidhi Eng. Faysal Cali Waraabe oo ka hadlayay hordhicii waraysi dheer oo TV-ga Kalsan ka qaaday.
Waxa ka taagan xisbiga UCID khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya Hoggaanka xisbiga gaar ahaan Guddoomiyaha iyo Murrashaxa madaxweynaha, khilaafkaasi oo gaadhay in maxkamadda sare ay go’aan ka soo saarto khilaafkooda oo ay ugu baaqday in labada garab ee xisbigu u qeybsamay ay qabsadaan shirkii golaha dhexe ka dibna ka ansixiyaan heshiiskii hore murrashaxnimadda loogu cumaamaday Jamaal Cali Xuseen.
Faysal Cali Waraabe labada jeer oo hore ayuu u tartamay madaxtinimadda Somaliland oo uu labadiiba ku guul-daraystay, waxaanay kala ahaayeen doorashooyinkii madaxweynaha ee dalka laga qabtay 2003 iyo 2010.